Maxaad Kala Socotaa Hawlaha Shirkadda Faracyada Badan Ee (Somgulf Group)? – Codka Qaranka Tanadland
Maxaad Kala Socotaa Hawlaha Shirkadda Faracyada Badan Ee (Somgulf Group)?
Wax kastaaba waxay leeyihiin wax lagu cabiro. amaba looga qiyaas qaato isku cel-celiska cabirada uu shay leeyahay sida muggooda, dhumucda, tanka, xooga, cufnaanta, xawaarahooda, kaynaanka, karaarkooda iyo qul-qul kooda. umadaha ilaahay waa ay noocyo badan yihiin, waana ay kala dhaqamo iyo macaamil duwan yihiin. umado waxaa jira xag walba ka midaysan oo nafta siday isugu hurahayaan aad yaabaysid. balse marka ay is yiraahdaan dan guud baa laga shaqaynayaa ee bal xoogaa shilimaa meel ha laysugu keeno ay taasi ku adkaanayso.
Umad aan cududeeda maaliyadeed meel isugu geyn karin oo aan dhaqaalaha ka midaysnaynna lama orankaro umadaasi waa ay midaysantahay. Maxaa wacay?, midnimada dhaqaale ayaa lafdhabar u ah qaybaha kaladuwan ee loo baahanyahay inay umadi ka midaysnaato. Midnimada iyo isku duubnaanta umada karaamaysan ee Tanadland, Waxaa laga dheehan karaa oo tusaale fiican inoogugu filan shirkaddaha faracyada badan oo nooc walbaba leh ee ay leeyihiin. Shirkaddahaasna shaqsiyaad malaha, kooxina gaar uma laha, beelina xataa malaha ee waa sanuudii umada Tanadland oo meel laysugu geeyey. Dadka madaxda loogaga dhigay oo hantidaas noo maamulaana waa dad kalsooni buuxda lagu qabo oo waa xulkeenii. shirkadda baaxada weyn ee (Somgulf Group) waxay ka mid tahay shirkaddahaas aan soo sheegay. waqtigaan xaadirka ahna waa shirkadda ugu macaash-celinta badan shirkaddaha reer Tanadland oo dhan. Shacabkuna ay miiddeeda heleen oo ay aalaa afka ku hayaan amaanteeda.
Shirkadda baaxada weyn ee (Somgulf Group) ilaa iyo hada dhismayaasha ay wadanka imaraadka carabta (UAE) ka dhistay waa 5 daarood oo dheer-dheer. isuguna jira 2 daarood oo ay midiiba labo daarood oo isku mataanaysan ay yihiin. 3-da daarood ee kaleetana waa daaro midiib ay gooni u taagantahay. 3 daarood oo kamid ahi waxay ku yaalaan magaalada cusub ee (Emirates City). hal daar oo ka kooban 2 daarood oo mataano ahna waxay ku taalaa Magaalo madaxda maamul goboleedka (Ajman) ee Ajman xaafada farasmagaalaha u ah. daarahaas mataanaha ahna waxaaa la yiraahdaa (Somgulf Twin Tawers). daarta [El Zour Tawer] la yiraahdana Shirkadda (Somgulf Group) waxay ka taagtey magaalada (Sharja) ee isla wadanka imaraadka carabta (UAE). Shantaas mashruuc oo ay hirgelisey (Somgulf Property Development) oo ah farac ka mid ah shirko-horinta (Somgulf Group). ayaa ah mashaariicda ugu waaweyn ee ay ilaa iyo iminka shirkadda (Somgulf Group) ay hirgelisey.
Hase ahaatee walow shirkadda (Somgulf Group) ay dhanka dhismaha mashaariicda waaweyn ee daaraha dhaadheer uga danbayso shirkadda (Tawakal State Agent). oo ay daaraha ay dhistay iyo dhulka ay gadatayba ay ka tiro yaryihiin kuwa (Tawakal State Agent), saas oo ay tahay shirkadda (Somgulf Group) la soo wareegida iyo dib u gadida dhulka, dhismaha guryaha, xaraash kula wareegida guryaha iyo mushtarka dib u iibintoodaba daqliga uga soo xerooda ayaa ka baaxad weyn tan (Tawakal State Agent) soo gala.
Intaasna waxaa u raaca (Somgulf Group) waa shirkad isku filan oo aan shirkad kale u baahnayn. metalan marka ay shaqaale u baahato waxay ka qaadataa shirkadda (Somgulf Contracting Company) oo hawlahaas ka shaqaysta. Marka ay mashaariic dhismayaal ah ay ebido waxaa u gada shirkadda (Somgulf Real Estate) oo guryaha iibintooda ka mushtarta. Saas oo ay tahay hadana labada shirkaddood ee ugu muhiimsan shirko-horinta (Somgulf Group) waa (Somgulf Property Development) iyo (Somgulf Real State Brokers). caalamka horay u maray Bangiyo iyo shirkaddaha waaweyn ee wax dhisa talaabo horay uma qaadi karaan shirkad shirkaddaha waaweyn wax u kala wareejisa (Brokers Company) la’aanteed. shirkadda (Somgulf group) intaan ogahay waa shirkadda kaliya oo ay soomaaliyi leedahay oo leh (Brokers Company) ama shirkad-dulaal shati u haysata ka mushatarida moodka, noolka, iyo ascaarta lacagaha.
Shirkadda (Somgulf Group) mudadii gaabnayd ee 5-ta sanadood ahayd oo ay jirtey waxay gaartey meel ay adagtahay in looga dabatago. muhiimada 1-aad ee shirkadd ay leeyihiin saamiley isutagtay waa in ay macaashul-macaashka ugu badan ee suurtagalka ah ay mulkiile yaasheeda u tabacdo. qaabdhismeedka shirkadda (Somgulf Group) ay u samaysan tahayna wuxuu suurtogal ka dhigay in ay saamileydooda u tabcaan macaash shirkaddaha kale aysan ku riyoon.
Hase ahaatee dhaliisha kaliya oo ay leedahay shirkadda (Somgulf Group) loona baahanyahay in ay wax ka qabtaan waxay tahay. shirkadda (Somgulf Group) oo ah shirkadda dhismaha ee ugu balaaran ee bariga Africa laga leeyahay saamigeeda 100% waxaa iska leh maalgeliyeyaasha Tanadland. Taasina saamileyda shirkada (Somgulf Group) dan uma aha iyo shirkadda aayaheeda toona. ee waa in ay caasimada Soomaaliya iyo gobolada dalka Soomaaliya ugu qayraadka badan ee (Jubaland) ay maalgeliyeyaashooda shirkadda ku soo xiraan.
Shirkadda (Somgulf Group) xarunteedu waxay ku taalaa magaalada (London) ee cariga ingiriiska. waxayna xafiisyo ku leedahay 8 wadan sida 1) (UAE), 2) (Qatar), 3) ,(Jabuuti), 4) (Kenya), 5) (Tanzania), 6) (Uk), 7) (Egypt), 8) (Uganda). Shirkada (Somgulf Group) waxay mashaariic ganacsi uga socotaa magaalooyin ku yaala wadamo dhowr ah sida A) (Sharjah), B) (Ajman), C) (Mecca, Saudi Arabia), D) (Dubai), E) (Emirates City). shirkaddu waxay kamid tahay dhawr shirkaddood oo iskalahaa talada lagu aas-aasay ururka maalgeliyeyaasha Soomaaliyeed oo ay xaruntiisu magaalada (Jabuuti) tahay.
Shirkadda baaxada weyn ee (Somgulf Group) waxaa la unkay sanaddu markii ay ahayd (2005), waxaxaana lagu aas-aasay magaalada dhismaha ku caanbaxday ee (Dubai). waxaana aas-aasay 11 nin oo maalqabeenada reer Tanadland ka mid ah. shirkadda faracyada badan ee (Somgulf Group) ayaa waxay ka koobantahay 5 shirkadood oo middiiba ay leedahay hogaan iyo maamul u gooni ah. sida 1) (Somgulf Real Estate), 2) (Somgulf Property Development), 3) (Somgulf General Trading), 4) (Somgulf Contracting Company), 5) (Somgulf Real State Brokers), Dubai-Box No. – 21694 – Phone -2220104 Fax – 2220196).
Shirkadda (Somgulf Group) sanadkii  talaabo waxkuool ah ayey horay u qaaday, waxayna dejisey qorshe aad u baaxad weyn oo aan ahayn wax laga filan karey in ay ku hamiyi karto shirkad soomaaliyeed. bal in ay qorshahaas fuliyaan ha joogtee. shirkadda (Somgulf Group) oo ay aas-aaseen niman wadaado ah oo ay xirfadoodu bangiileyaal iyo injineero u badantahay, markii ay saamiga shirkaddooda ay fureen oo la ogaadey qorshaha iyo himilada ay shirkaddu leedahay. hadii lays waraystay dadka qaar ka mid ah waxay ula muuqdeen nimankaasi, in ay yihiin duul qamarjiyiin ah oo wax ay shilimadooda salfadaan tolka ka dhex goobahaya.
[Ninka Shirkadaha reer Tanadland ay martida u yihiin oo maamul goboleedka Ajman Amiirka ka ah, The Emir Of Ajman (Sheikh Humaid Bin Rashid al-Nuaimi)]. Sababtoo ay tahay reer Tanadland dekado ay maraakiibta waaweyni ku soo xirato malaha, oo garoomo diyaaradeed oo ay gaar u leeyihiin xataa malahan. niman kaanina kooxdiiba waxay gaar u goobahayeen lacag ($500 milyan) ka badan, oo dhul saxare ah bacaad hadba gar u yaacahaya lagu dhex shubo. weliba shirkadda (Somgulf Group) waxaa intaas u weheshay hami ah in shirkadda dhismaha ee ugu balaaran oo Bariga Africa laga leeyahay ay noqdaan. horyaalka hormuudnimadana ay ka faramarooqsadaan shirkadda iyaduna faracyada badan ee (Tawakal Estate Agent). oo iyadu markaas qandaraasyada mashaariicda dhismaha mudo yar oo bilo ah ka hor qaadatay. mashaariicda dhismaha ee ay ka fulineyso maamul goboleedka (Ajman) -na uu ka balaaran yahay kan (Somgulf Group).
Marka dadka qaarkood markii ay maqleen, waxay la noqotay wax laguqoslo oo aanan sinaba suurtagal u noqonkarin. waxaa kaloo iyaduna jirtey dareen iyo wal-wal laga qabey, oo ah cawaaqibxumada ka dhalan karta in maaliyadii umada Tanadland 25% khaliijka la geeyey. dhul iyo guryana la geliyey. hantidaas oo u gacan gashay bangiileyaasha maamula shirkaddaha (Somgulf Group) iyo (Tawakal Estate Agent).
Balse galadda ilaahay, 99% maalgeliyeyaasha reer Tanadland waxay muujiyeen aragti taas ka duwan oo hor’usocodnimo ah. maalgeliyeyaasha reer Tanadland waxay muujiyeen in ay yihiin dad xilkas ah oo garawsan in si loogaaro umaddoodu meesha ay higsanayso in uu hal’adaygu lama huraan yahay. in midnimada iyo wax iskudarsigu ay lama huraan u yihiin dantooda guud ahaaneed iyo aayatiinka ubadkooda. maalgeliye-yaasha reer Tanadland waxay caalamka u muujiyeen waxa ay umadi qabsan karto marka ay indheergarad kooda talada u dhiibtaan, talad ay u gooyaana ay wadajir ku adeecaan iyo kalsooni buuxda.
[Sawirka daarta Carlton -Centre oo ilaa iyo hada ah daarta daaraha qaarada Africa ku yaala ugu dheer] 19 -kii June 2006 oo ahayd maalintii mashruuca [Emirates City] lagu dhawaaqay shirkadda [Royal Holding] oo ah shirkada maamulaysa mashruuca. maalintaas (Ahmad Awwad) oo ah madaxa shirkada [Royal Holding] waxa uu sheegay in mashruuca [Emirates City] uu yahay mashruucii ugu horeeyey oo noociisa ah. wuxuuna ku faanay in aan hortood looga samayn dunida mashruuc dhismayaal dhaadheer oo 72 daarood ah. walow ay 72-da daarood oo dheer-dheer ay weheshaan dhismayaal kale oo aad u baaxad weyn balse aan dheer-dheerayn oo u Mall ugu weynyahay.
Balse galadda ilaahay, 99% maalgeliyeyaasha reer Tanadland waxay muujiyeen aragti taas ka duwan oo hor’usocodnimo ah. Weriye: Saxardiid
Maalintaas iyada ahna waxaa goobta madasha fadhiyey madaxda 2 shirkaddood oo ay reer Tanadland leeyihiin uuna (Ahmad Awwad) qandaraaska siiyey. daaraha [Emirates City] daarta ugu gaaban waa 20 dabaq oo aysan dabaqyada gawaarida loogu talogalay ku jirin. dabaqa ugu dheerna waa 50 dabaq oo aysan dabaqyada gawaarida loogu talogalay ku jirin. labada shirkaddood ee (Somgulf Group) iyo (Tawakal Estate Agent) daarahooda isu geyn marka laysku daro daarta ugu dheer, daarta ugu gaaban iyo inta u dhexaysaba waa ay leeyihiin.
(Tawakal Tawer) waa daarta ugu dabaqa dheer oo shirkaddaha reer Tanadland magaalada (Emirates City) ay ku leeyihiin, waana 50 dabaq oo ay leedahay shirkada [Tawakal State Agent]. [Tawakal State Agent] oo ah faraca dhismaha ee shirkadda (Tawakal Express), islamar ahaantaasna daaraha ay mashruuca [Emirates City] ku leedahay labo kamid ah sumada shirkadda Tawakal ay wataan. waxay kalayihiin [Tawakal Twine Tawer] iyo [Tawakal Tawer].
Qaarada Africa daarta ugu dheer waxaa la yiraahdaa [Carlton Centre] oo ku taal magaalada (Johannesburg) ee dalka South Africa, waxayna ka koobantahay 50 dabaq. taasina waxay ku tusaysaa heerka shirkaddaha dhismaha ee reer Tanadland ay gaareen iyo cududooda dhaqaale. rabi ka sokowna amaanteeda waxaa iska leh oo u sabab ah maalgeliyeyaasha reer Tandland oo ku sifoobey indheergaradnimo iyo xeel-dheeri.